October 7, 2019 - ThutaSone
October 7, 2019 ThutaSone 0
သွေးချိုတက်စာတွေ များများစားလည်း တက်မလာတော့တဲ့ အကောင်းဆုံး ဆီးချိုကျ သဘာဝဓာတ်စာ ကျနော်ငယ်ငယ်ထဲက သကြားမကြိုက်လှပေမယ့်် လွန်ခဲ့တဲ့၇နှစ်လောက်က စပြီး ဆီးချိုရှိလာခဲ့တယ်။ ဆရာမကြီး ဒေါက်တာဒေါ်သန်းသန်းအေးနဲ့ ပြလို့ သူညွန်ကြားတဲ့အတိုင်း သောက်လာခဲ့တာ ဒီချိန်မှာတော့ metformin တလုံး၃ကြိမ်၊ Diamecron ၃၀mg တကြိမ်၊Clopelet,Prolomeg နေ့စဉ်တကြိမ်စီ၊ သောက်နေပေမယ့် မနက်အိပ်ယာထဆို […]
မိမိလက်​ဖဝါးရဲ့အလယ်​ဥာဏ်​လမ်း​ကြောင်းနှင့်​နှလုံးလမ်း​ကြောင်းကြား တဝှိုက်​မှာကြက်​​ခြေခတ်​ အမှတ်​သား​လေးပါလာမယ်​ဆိုရင်
လက်​ဖဝါးရဲ့အလယ်​ဥာဏ်​လမ်း​ကြောင်းနှင့်​နှလုံးလမ်း​ကြောင်းကြား တဝှိုက်​မှာကြက်​​ခြေခတ်​ အမှတ်​သား​လေးပါလာမယ်​ဆိုရင် လက်​ဖဝါး​ပေါ်က ( ဂမ္ဘီရ ကြက်​​ခြေခတ်​) လက်​ဖဝါးမှာပါတဲ့ ဂမ္ဘီရကြက်​​ခြေခတ်​နဲ့ပါတ်​သက်​၍ လက္ခဏာကြည့်​ပရိသတ်​အ​တော်​များများလာ​ရောက်ေ​မးကြသည့်​အတွက်​တင်​ပြ​ပေးလိုက်​ပါသည်​။ လက္ခဏာရှင်​ရဲ့လက်​ဖဝါးရဲ့အလယ်​ဥာဏ်​လမ်း​ကြောင်းနှင့်​နှလုံးလမ်း​ကြောင်းကြား တဝှိုက်​မှာကြက်​​ခြေခတ်​ အမှတ်​သား​လေးပါလာမယ်​ဆိုရင်​​တော့ ထိုအမှတ်​အသား​လေးကို ဂမ္ဘီရကြက်​​ခြေခတ်​လို့​ခေါ်ပါတယ်​။ ( 1 ) လက္ခာဏာ ​ဗေဒင်​ နဲ့ ထူဆန်းနက်​နဲတာ​တွေ ကိုဝါသနာပါပြီး ​အခြားပညာရပ်​များကို​လေ့လာလိုက်​စားတတ်​သည်​။ ( […]
အလွမ်းအဆွေး သီချင်းများနဲ့ လူငယ်တွေအကြား ရေပန်းစား ကျော်ကြားနေတဲ့ လူငယ်တေးသံရှင်တဦးလည်းဖြစ်၊ ဆရာဝန်တဦးလည်း ဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံတယောက် မူးယစ်ဆေးဝါးအမှုနဲ့ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မူရင်း သတင်း အပြည့်အစုံကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်- အောက်တိုဘာ၇။ အဆိုတော်ဖြိုးပြည့်စုံကို ယနေ့ညနေ၆နာရီခန့်က မြန်မာပလာဇာတွင် မှုးယစ်ဆေးဝါးမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံ […]
“ဆရာကြီး …သမီး သီတင်းကျွတ် လာကန်တော့တာပါရှင့်” “ကျေးဇူးပါ..သာဓုပါကွယ်… အိမ်မှာ အဖေနဲ့အမေ ရှိသေးလား.. သူတို့ကိုရော ကန်တော့ပြီးပြီလား” “ဟုတ်..ကန်တော့မှာပါ” “သမီးလခ ဘယ်လောက်ရသလဲ” “၃သိန်း -၄ သိန်းရပါတယ်” “မိဘ ကို တစ်လ ဘယ်လောက် ကန်တော့လဲ” ” လစဉ်တော့မကန်တော့ဖြစ်ဘူးဆရာ..အခုလို သီတင်းကျွတ် .. […]
ယုံကြည်မှုကို အားနည်းစေတတ်သည့် ခံတွင်း အနံ့ဆိုးကို ဖျောက်မယ်
ခံ တွင်း ပုတ် အနံ့ ခံတွင်း ပုတ် အနံ့ သည် လူတယောက်အတွက် မိမိကိုယ် ကို ယုံကြည်မူ့ မဲ့စေပါသည် . ခံတွင်းအနံ့ မကောင်းသူများသည် လူအများ ကြားတွင် စကားပြောဆိုရာတွင် မိမိ ၏ ပါးစပ်မှ အနံ့ ကြောင့် သူတပါးအား […]
၁ ရက်ကို ၁ နာရီလောက် ဒီအချက်တွေကိုလုပ်ဖို့ အချိန်ပေးလိုက်ပါမင်းဘဝကြီးပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်
အလုပ်ပြီးချိန် ညခင်းတွေမှာ မင်းဘာလုပ်လဲဆိုတာက မင်းရဲ့ အနာဂတ်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်။ တစ်နေ့ကို တစ်နာရီလောက် ဒါတွေလုပ်ဖို့ အချိန်ပေးလိုက်ပါ။ မင်းဘဝပြောင်းလဲပါလိမ့်မယ် မင်းရဲ့ အလုပ်ချိန် ညနေ6နာရီမှာ ပြီးပြီးတော့ မင်းက ည သန်းခေါင် 12 နာရီမှ အိပ်ရာဝင်တယ်ဆိုပါစို့။ ဒီကြားထဲက6[…]
World Ranking တရိပ်ရိပ်မြင့်တက်လာနေသော သက်ထားသူဇာနင့် အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်အလားအလာ
ကျနော်တို့ ရဲ့ အချစ်တော်လေး မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ကြက်တောင်အားကစားမယ်လေး သက်ထားသူဇာဟာ ၂၀၂၀ မှာ ကျင်းပမဲ့ တိုကျိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပြီး နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင်ဖို့ ကြိုးစားနေတာ အားလုံးပဲ အသိပါ…. အိုလံပစ်မှာ သတ်မှတ်တဲ့အဆင့်ဝင်နိုင်ဖို့ နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေကို ဆက်တိုက်ကစားခဲ့တဲ့ သက်ထားသူဇာဟာ ခုချိန်မှာတော့ ကမ္ဘာ့အဆင့် ၆၆ မှာ ရပ်တည်နေနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. […]
အောက်တိုဘာ(၇)ရက်နေ့မှာ သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်သွားတဲ့ သရုပ်ဆောင်နေမင်း
ပရိသတ်ကြီးရေ.. အနုပညာလောကမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုတွေတခဲနက်ရရှိထားပြီး အောင်မြင်မှုတွေသိမ်းပိုက်ထားကြတဲ့ ပြည်သူ့အချစ်အနုပညာရှင်တွေထဲမှာ သရုပ်ဆောင်မင်းသားချော နေမင်းကလည်း အပါအဝင်ပါပဲ..။ အောင်မြင်တဲ့အနုပညာရှင်အဖြစ် လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် သရုပ်ဆောင်မင်းသားချောနေမင်းကတော့ ဒီကနေ့လေးမှာပဲ သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်နော်..။ ဒီကနေ့ အောက်တိုဘာ(၇)ရက်နေ့မှာပဲ ရွှေဘုန်းပွင့်ဘုရားမှာ သာ့သနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ပြီး ကုသိုလ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဆံချတဲ့အမှတ်တရလေးတွေနဲ့ သာသနာ့ဘောင်ဝင်တဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်း နေမင်းက ချစ်ပရိသတ်တွေကို ပြန်လည်မျှဝေထားပါသေးတယ်..။ […]
စိတ်မကောင်းစရာ ဦးဇင်းလေးရဲ့ အဖြစ်ရယ် သာသနာ့အတွက် နမျှောစရာပါ မျှဝေပေးကြပါအုံး
မယ်တော်ကြီးရဲ့ လျှာကင်ဆာကို ကုသဖို့ ငွေကြေးမတတ်နိုင်လို့ လူထွက်ပြီး အလုပ်လုပ် ငွေရှာပြီး ဆေးကုပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ ဦးဇင်းလေး သာသနာ့ ဘောင်မှာမြဲအောင် ကူညီပေးကြပါ အုးံ ခင်ဗျာ ။ ဦးဇင်းလေးဘွဲ့က အရှင်ခေမိန္ဒပါ ရန်ကုန် ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် စံပြငါးဈေးအနီး နတ်စင်လမ်း ပြည်လုးံချမ်းသာကျောင်းတိုက်မှာ သီတင်းသုးံရင်း ပရိယတ္တိ စာပေ […]
မူကြိုကျောင်း တာဝန်ရှိသူ ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင်ကို ရှေ့နေများ အမှုပြန်ဖွင့်မည်
နေပြည်တော် Wisdom Hill မူကြိုကျောင်း တာဝန်ရှိသူ ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင်ကို အမှုပြန်ဖွင့်မယ်လို့ ရှေ့နေပြော… ဗစ်တိုးရီးယားအမှုမှာ ရှေ့နေ ဒေါ်စုဒါလီအောင်ကို အမှုဖွင့်ခဲ့တဲ့ Wisdom Hill မူကြိုကျောင်း တာဝန်ရှိသူကို ပြန်အမှုဖွင့်မယ်လို့ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦသိန်းသန်းဦးက ပြောပါတယ်။ ဒေါ်စုဒါလီအောင်ရဲ့ လွတ်လပ်မှုနဲ့ လုံခြုံမှုကို ခြိမ်းခြောက်ခံနေရပြီလုိ့ ယူဆတဲ့အတွက် […]